Ebumnuche nke obi na-atọ ọchị atọ n'ime otu | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ụdị Ihe Mgbochi Ọganihu evolutionary nke ụbụrụ
Lelee minit 5 a video iji nweta nkọwa zuru oke banyere akụkụ ụbụrụ na ọrụ ya.
Otu n'ime ụdị ndị ama ama ama ama maka ịghọta ụbụrụ bụ mbido mgbanwe n'ụdị ụbụrụ. Onye neuroscientist Paul MacLean mepụtara nke a wee nwee mmetụta dị ukwuu na 1960s. Kemgbe ọtụtụ afọ kemgbe, agbanyeghị, ọtụtụ ihe dị n'usoro a ka a ga-emezigharị n'ihi nyocha nke nyocha ọhụụ. Ọ ka bara uru maka ịghọta ụbụrụ ụbụrụ n'ozuzu ya. Originalkpụrụ mbụ nke MacLean mere ka ọdịiche dị iche iche dị iche iche gosipụtara nke ọma n'oge mgbanwe:
Nke a bụ akụkụ kasị ochie nke ụbụrụ. O mepụtara banyere 400 nde afọ gara aga. O nwere isi ihe dị na ụbụrụ ụbụrụ: ụbụrụ ụbụrụ na cerebellum. Ọ dị n'ime ala anyị, ma dabara n'elu ọkpụkpụ anyị. Ọ na-achịkwa ọrụ anyị kachasị dịka ọnụọgụgụ obi anyị, okpomọkụ ahụ, mgbali ọbara, iku ume na nhazi. Ọ na-enye aka ịchịkọta ya na ndị ọzọ abụọ 'obi' n'ime isi anyị. Ụbụrụ reptilian bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya, ma ọ na-eche na ọ dị nkenke ma dị ike.
Ụbụrụ Limbic. A na-akpọkwa ya ụbụrụ anụ ahụ
Ụbụrụ ụbụrụ na-ejikwa usoro limbic ahụ ahụ. Ọ malitere na 250 nde afọ gara aga na mmalite nke ụmụ anụmanụ mbụ. Ọ nwere ike idekọ ihe ncheta omume nke mepụtara ahụmahụ ndị na-ekwenye ekwenye na ndị na-ekwesịghị ekwesị, n'ihi ya, ọ bụ maka ihe a na-akpọ 'mmetụta' n'ime ụmụ mmadụ. Nke a bụ akụkụ nke ụbụrụ ebe anyị na-adaba na ịhụnanya, na nkekọ ndị ọzọ. Ọ bụ isi nke usoro ntụrụndụ ma ọ bụ usoro nkwụghachi ụgwọ n'ime ụmụ mmadụ. Anụmanụ, gụnyere ụmụ mmadụ, kwesịrị ịzụ ụmụ ha maka oge tupu ha adị njikere ịhapụ 'afụ' ahụ ma gbanye onwe ha. Nke a adighi ka ntanu aru nke anu aru nke na-eme ka akwa na akwapu ya.
Ụbụrụ ụbụrụ bụ oche nke nkwenkwe na ikpe ikpe anyị na-etolite, mgbe ọ na-amaghị nke ọma, na-etinye mmetụta dị otú ahụ dị ike n'àgwà anyị.
Usoro nke limbic nwere akụkụ isii - akụkụ thalamus, hypothalamus, pituitary gland, amygdala, hippocampus, nucleus accumbens na VTA. Lee ihe ha na-eme.
The thalamus bụ onye na-arụ ọrụ na kọmputa anyị. Ihe ọmụma ọ bụla (ma e wezụga ísì) nke na-abata n'ime ahụ anyị na-aga na nke mbụ anyị na thalamus na-eziga ozi gaa n'akụkụ aka nri nke ụbụrụ anyị ka ha weezie ya.
The hypothalamus bụ nke kaadị kọfị ma ọ nwere ike ịbụ ebe dị mkpa na ụbụrụ anyị. Ọ gụnyere ịchịkwa akpịrị ịkpọ nkụ; agụụ; mmetụta uche, ọnọdụ okpomọkụ; agụụ mmekọahụ, circadian (ụra) rhythms na usoro autonomic na ụjọ na usoro endocrine (hormone). Ke adianade do, ọ na-achịkwa pituitary glands.
The pituitary A na-akpọkarị ya 'ụta ukwu', n'ihi na ọ na-emepụta homonụ nke na-ejikwa ọtụtụ endocrine ma ọ bụ hormone glands. Ọ na-eme ka hormone na-eto eto, hormones na-eto eto, hormone na-akpali akpali, prolactin na Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH, nke na-akpali hormonone na-adrenal stress, cortisol). Ọ na-emekwa ka mmiri ọgwụ ahụ na-eme ka a ghara ịkpọ hormone a na-akpọ anti-diuretic hormone (ADH).
The amygdala na-ejide ụfọdụ nhazi ebe nchekwa, ma ọtụtụ akụkụ na-eji mmetụta ndị bụ isi dị ka egwu, iwe na ekworo.
The hippocampus etinye aka na nhazi nhazi. Akụkụ ụbụrụ a dị mkpa maka mmụta na ebe nchekwa, maka ịgbanye ncheta oge dị mkpirikpi ka ọ bụrụ ihe ncheta na-adịgide adịgide, yana maka icheta njikọ gbasara ohere gbasara ụwa.
The Ngwurugwu Accumbens na-ekere òkè dị mkpa na njem ụgwọ ọrụ. Ime ya na-adabere na isi abụọ dị mkpa: dopamine nke na-akwalite ọchịchọ, na serotonin nke mmetụta ya gụnyere satiety na mgbochi. Ọtụtụ nchọpụta ụmụ anụmanụ egosiwo ọgwụ na-eme ka mmepe dopamine na-emewanye ihe na-eme ka ọ dị njọ, ma na-ebelata nke serotonin. Ma isi ihe na-eme ka ọ ghara ịrụ ọrụ. Ọ na - enwe mmekọrịta chiri anya na ndị ọzọ na - emetụta usoro ihe ụtọ, na karịsịa, na mpaghara ọnụ ọgụgụ dị iche iche, nke a na-akpọkwa VTA.
N'etiti ụbụrụ, n'elu ụbụrụ ụbụrụ, VTA bụ otu n'ime akụkụ mbụ nke ụbụrụ. Ọ bụ ụbụrụ nke VTA nke na - eme dopamine, nke ha na - ezigazi na - ezigara na nsogbu ahụ. Vorphins na-emetụta VTA nke ndị na-anabata ya bụ ndị ọgwụ opiate dị ka heroin na morphine.
Neocortex / cerebral cortex. A na-akpọkwa ya Brain Neomammalian
Nke a bụ 'ụbụrụ ọhụrụ' nke ga - amalite. A na-ekezi ụbụrụ ụbụrụ n'ime ebe na-achịkwa ọrụ ụfọdụ. Ihe dị iche iche nke usoro ihe ọmụma site n'echiche anyị, na-enyere anyị aka ịhụ, inwe mmetụta, ịnụ, na uto. Akụkụ nke ihu nke cortex, ọdịdị ihu ma ọ bụ n'ọdịbụ anyanwụ, bụ ebe iche echiche nke ụbụrụ; ọ na-eme ka ikike anyị nwee iche echiche, atụmatụ, dozie nsogbu, igosipụta njide onwe onye na ime mkpebi.
Neocortex nke mbụ weere na ọ dị mkpa na primates ma mechie ụbụrụ mmadụ ya abụọ buru ibu akụkụ ụbụrụ na-arụ ọrụ dị otú ahụ bụ isi. Ndị a bụ ndị isi maka mmepe nke asụsụ ụmụ mmadụ (c 15,000-70,000 afọ gara aga), echiche ndị a na-ahụ anya, nchepụta na ncheta. Neocortex na-agbanwe agbanwe, ọ na-enwekwa ikike ịmụta ikike na-enweghị ngwụcha. Neocortex na-ekwe ka omenala ụmụ mmadụ nwee ike ịzụlite.
Ihe kachasị ọhụrụ nke neocortex ka ọ na-eme bụ cortex prefrontal nke mepụtara banyere 500,000 afọ gara aga. A na-akpọ ya ụbụrụ isi. Nke a na-enye anyị usoro maka njide onwe onye, ​​atụmatụ, ịmara, echiche ziri ezi, mmata, na asụsụ. Ọ na-ekwu banyere ọdịnihu, echiche ziri ezi na ezi uche na omume. Ọ bụ 'uche' nke oge ochie nke obi ike na-enye anyị ohere igbochi ma ọ bụ na-eme ka chekasị na omume rụrụ arụ. Nke ọhụrụ nke ụbụrụ bụ akụkụ nke ka na-ewu n'oge uto.
Brain nwere njikọ
Akụkụ atọ nke ụbụrụ ahụ, ndị Reptilian, Limbic na Neocortex, anaghị arụ ọrụ n'enweghị onye ọzọ. Ha emeela ọtụtụ njikọta nke ha na-emetụta ibe ha. Ụzọ ntanetị si usoro limbic na cortex, na-emepe nke ọma.
Mmetụta dị iche iche dị ike ma na-achụpụ anyị na ọkwa dị mgbagwoju anya. Mmetụta bụ ihe na-eme anyị karịa ihe anyị kpebiri ime. Ọtụtụ n'ime nkọwa maka enweghị ike ịchịkwa mmetụta anyị dị na ụbụrụ ụbụrụ mmadụ na-ejikọta.
Echiche anyị esiwo n'ụzọ dị otú a na ha nwere njikọ dịgasị iche na-esite na usoro mmetụta uche gaa na ngwongwo anyị (nchịkwa nke nlezianya) karịa ụzọ ọzọ dị gburugburu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mkpọtụ nke nnukwu okporo ụzọ dị n'okporo ụzọ awara n'okporo ụzọ na-agba ọsọ site na usoro limbic ka cortex nwere ike imetụ ụda dị jụụ n'okporo ụzọ dirt na-agba ọsọ na ntụziaka ọzọ.
Ụbụrụ gbanwere site na ịṅụ ọgwụ ọjọọ na - agụnye ihe isi awọ (mkpụrụ ndụ nerve) na cortex mbụ na usoro a maara dị ka 'hypofrontality'. Nke a na-ebelata ihe mgbagha ahụ na-eme ka ụbụrụ ụbụrụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume izere ime omume ahụ nke dị ugbu a ma bụrụ nke na-agwụ ike ma na-agwụ ike.
Ịmụta otú e si ewusi cortex nke mbụ, ya na njide onwe anyị, bụ ikike ndụ dị mkpa na ndabere nke ihe ịga nke ọma na ndụ. Uche a na-ejighị edozi ma ọ bụ ụbụrụ nke ịṅụbiga ahụ ike na-ezighị ezi nwere ike iru obere.